မိန်းကလေးများ မှတ်တိုင်မှာ ကားစောင့်ရင် အ၀ါရောင် သရေပင် လက်မှာ မပတ်မိစေနဲ့ နော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မိန်းကလေးများ မှတ်တိုင်မှာ ကားစောင့်ရင် အ၀ါရောင် သရေပင် လက်မှာ မပတ်မိစေနဲ့ နော်	30
မိန်းကလေးများ မှတ်တိုင်မှာ ကားစောင့်ရင် အ၀ါရောင် သရေပင် လက်မှာ မပတ်မိစေနဲ့ နော်
Posted by moonpoem on Jun 30, 2011 in Creative Writing, Short Story | 30 comments
သိပ်မကြာသေးခင်က ဦးဖက်တီး က စိတ်ဝင်စားရင် ဆက်ပြောမယ် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကို
ရေးလိုက်ပါတယ်။ အဖြစ်အပျက် ဦးဖက်ရဲ့ မိတ်ဆွေ ဖြစ်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မကတော့
ကျွန်မကိုယ်တိုင် ဒေါသ ထွက်ခဲ့ရပြီး ရှက်လို့ ဘယ်သူ့ ကိုမှ ပြောမပြတော့ဘူး ဆိုပြီး အခု သူငယ်ချင်းတွေကို
တိုးတိုးတိတ်တိတ်ရင်ဖွင့်လိုက်ရတာပါ။ မိန်းကလေး ရေးဖော်ရေးဖက်တွေ သတိထားစရာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆လလောက်ကပါ။ကျွန်မနေတာက ၂၈လမ်းမှာ အပေါ်ဘလောက်ဆိုတော့ လမ်းထိပ်ထွက်တာနဲ့
စူပါဝမ်းနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးနား ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ က ကျွန်မ နဲ့ မတွေ့ တာ ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်
လာတာ အိမ်ရှာမတွေ့ မှာ စိုးလို့ လမ်းထိပ်ကို ည၇နာရီလောက်မှာ သွားစောင့်နေပါတယ်။ စူပါဝမ်းက ၇နာရီမှာ ပိတ်ပါတယ်။
သူ့ ကို စောင့်ရင်းစောင့်ရင်း ၇နာရီသာခွဲသွားတယ် အရိပ်အရောင် မမြင်ရလို့ဖုန်းဆက်မယ်ဆို ပြီး အဲဒီနားကဖုန်းဆိုင်ကိုသွားတယ်။
ဆံပင်စီးထားတာကိုလည်း ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ် စိတ်တိုတာနဲ့ေ၇ာပြီး ခေါင်းကုတ်မိရာက ဖြည်ချပြီး စီးထားတဲ့
သရေပင် ကို လက်မှာ ပတ်လိုက်တယ်။ သိပ်မကြာပါဘူး အနားကို လူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး ဒီနေ့Parking ဖောက်မလား
မနည်း စေရပါဘူးတဲ့ ။ ကျွန်မလည်း အသားကုန် အော်ဟစ်ပစ်လိုက်တယ်။ ရဲ ခေါ်လိုက်ရမလားလို့ ဆိုပြီး တော့လေ။
အဲဒီလူက ဇဝေဇ၀ါနဲ့ ကြည့်ပြီး ပြောသွားသေးတယ်။ Parking ဖောက်မဟုတ်ရင် အ၀ါရောင်သရေပင်မပတ်နဲ့ ပေါ့တဲ့လေ။
ကြားဖူးတာကတော့ သရေပင် အရောင်တွေနဲ့ လိုင်းကွဲတယ်ဆိုတာကိုတော့ နောက်မှ သိရပါတယ်။ About moonpoem
ဆူး says: ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ လမင်းကဗျာရယ်..
etone says: မိုက်ရိုင်းလိုက်တာ ကြည့်စမ်း … ။ နားရင်းပါအုပ်ပစ်လိုက်ရမှာ … သားရေပင်ပတ်တိုင်း ဟိုဟာထင်နေလား ငါ့မျက်နှာသေချာကြည့် အဲ့ဒီရုပ်လား ဆိုပြီး ဗျင်းထည့်လိုက်ရမှာ … ။ :P :P :P
ရှက်လည်းရှက် ဒေါသလည်းထွက်လို့ :angry
nigimi77 says: အီးဒုံး သားရေပင်ကို လက်တွင် စည်းလိုက်သည့် အခိုက် လူတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး……
ဒီနေ့ပါကင် ဖောက်မလား မေးလိုက်သော အခါ အီးဒုံးသည် လွန်စွာ ပြင်းထန်သော ဒေါသထွက်လာကာ
” မိုက်ရိုင်းလိုက်တာ ကြည့်စမ်း …” “ငါ့မျက်နှာသေချာကြည့် အဲ့ဒီရုပ်လား..” ဆိုပြီး ဗျင်းထည့်လိုက်သော အခါ
အဆိုပါ သကောင့်သားသည် အံ့သြ တွေဝေသွားသော မျက်နှာဖြင့်…..
” ကြည့်စမ်း …ငါ တော်တော် လူကဲ ခတ်ညံ့သေးတာပဲ …အဲဒီရုပ်ထက် ဟိုရုပ်တွေက ပိုပြီးလန်းတဲ့ဟာကို..”
etone says: မနက်က ရေးထားတာ ဘယ်ရောက်သွားလဲ ။ ကော်နက်ရှင်ကြောင့် မတတ်တာလား ၊ ပို့စ်တင်သူက ဖျက်ပစ်တာလား ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ထပ်ရေးတယ်ကွာ ။
ဒီမှာ ဘဲအိုကြီး ဆဲဗမ်းဆဲဗမ်း
ကြက်တွေက ဘယ်လောက်လန်းလန်း ကြက်ရုပ်က ကြက်ရုပ်ပဲ… သဘောပေါက် ။ မျက်လုံးကြည့်တာက အစ ၊စကားပြောဟန်ပန်ရုပ် ကြက် လက္ခဏာ ပေါက်တယ် ။ သာမန် မလုပ်စားတဲ့ မိန်းမနဲ့ ကွာမှ ကွာပဲ … ။
စကားကြုံလို့ ပြောလိုက်ဦးမယ် … မှတ်တိုင်မှာ ရပ်နေတဲ့ ကြက် အများစုက တယောက်မှ အလန်းမပါဘူး ။ ကြက်အလန်းတွေကျက်စားတဲ့ နေရာက ကလပ်တွေ ၊ ဆိုင်တွေ ၊ အခန်းတွေထဲရော ဆိုတာ(ပို့စ်တခုက ရေးသားချက်အရ) ကြက်နဲ့ စကားပြောဖူးတဲ့ ရှင်က ပိုသိမှာပါပဲ ။
နွယ်ပင် says: သူတို့တွေကလဲ ထွင်ပဲ ထွင်နိုင်လွန်းတယ် အရင်ကလဲ ကားဂိတ်တွေမှ ခြင်းတောင်းကိုင်ပြီး အကြာကြီးရပ်နေ၇င် အဲတာဆိုပြီးကြားဖူးတယ် အခုလဲ လာပြန်ပြီ ..မိန်းမကောင်းလေးတွေမှာ ဘယ်လိုနေရမှန်းကို မသိတော့ဘူး
windtalker says: ရန်ကုန် ရောက်ရင်တော့ အင်း ရန်ကုန်ရောက်ရင်တော့ ။ “ သားရေကွင်း လက်ပတ် ပါရင် သတိထား ” ရမယ်ပေါ့ဗျာ ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 874
moethidasoe says: လကဗျာ ရယ်
တို့များငယ်ငယ်တုန်းက လမ်းဘေးမှာ (တိုင်ကီအဖုံးမှာ တပ်ထားတဲ့ ၀ါရှာကွင်း အနက် ကိုိ) လက်ကောက်ပုံစံ ၀တ်ဆင်ထားရင် တကွင်းကို ၂၅ ကျပ်လို့ သတ်မှတ်ထားတယ် .. အဲဒီတုန်းက ညငှက်တွေ အဲဒီလို ကိုယ့် ကြေးကို ကိုယ် ဖြတ်ပြီး အသံတိတ် ဈေးခေါ်တယ် .. (အဲဒီတုန်းက ရုံးလုလင်လစာ ၆၀ကျပ်)
အခု အ၀ါရောင် သားရေကွင်းကိစ္စတော့ မသိသေးပါ .. ဗဟုသုတအတွက် ကျေးဇူးပါ
naywoonni says: အဲသဟာ ခုမှမဟုတ်ဘူး ဗျာရေ…… ဟိုးးးအရင် ကတည်းကရှိတယ်..။ ရောက်ဖူးလို့ ကြုံဖူးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး…။ ဆရာမြသန်းတင့်ရဲ့ စနေနေ့ည အဖျားဆိုတဲ့ ၀တ္ထုလေးဖတ်ဖူးလို့ပါ…။ အဲဒိတုန်းကတော့ စနေနေ့ နေ့တစ်ဝက်ရုံးတက်ရတဲ့ခောတ်လေ…..။ ရုံးကအပြန် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲ ၀င်လှုပ်ရှားကြဆိုပဲ..။ သရေပင် အရောင်က အနီရောင်ဆိုလားပဲ..။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 600
weRone says: အော် အခုခေတ် ကာလတွေ ပြောင်းတော့ အနီရောင် က နေ အ၀ါရောင် ပြောင်းသွားတားလမသိဘူး နော်။
သရေပင် လက်မှာ ပတ်မိတာ ဆံပင်အရှည်ထားလို့။ ဆံပင် မရှည်ရင် စည်းစရာမလိုဘူး။ စည်းစရာမလိုရင် သရေပင် မသုံးဖြစ်ဘူး..။ ဒီတော့ မိန်းမကောင်လေးတွေ အားလုံး ဆံပင် စည်းစရာ မလိုအောင် တိုတို ညှပ်လိုက်။ ဒါမှ မဟုတ် ခဏခဏ ညှပ်နေရ လို့ ဘတ်ဂျက် ထိခိုက်တယ် ထင်ရင် ကတုံးသာ တုံးထားလိုက်တော့။ :D :P
king says: အင်း ….
ဒီဟာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်ထုတ်စားရင်တော့ …
R Ga says: အခုကဘာ လက္ခဏာမှ မပါတော့ဘူး…ထင်တယ်။ နောက်နေ့ ကြုံရင် ဓာတ်ပုံရိုက်လာခဲ့မယ် လမ်း ၄၀ အပေါ်ဘလော့ မှတ်တိုင်မှာအများကြီးပဲ…။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 101
noob says: ဘာ လက္ခဏာမှ မပါဆို အဲဒါတွေက ” ဂဒပ် ” prostitute တွေလေ ဘယ်ပါမလဲ ဘာအမှတ်အသားမှမလိုတော့ ဘူး သူတိုက intermediate အဆင့်လောက်ရှိတယ်
သူများအကြည်တောင့်မခံတော့ဘူး သူတို ကအရင် လိုက်ကြည်တာ
padonmar says: ကျောင်းတက်တဲ့အချိန်တုံးက သားရေပင်အနီ လက်မှာမပတ်နဲ့ ကြားဖူးတယ်။
ကောင်းတာတော့ ဘာရောင်မှ မပတ်မိစေနဲ့ပေါ့။
တစ်ခါက ကျွန်မကား တိုင်းရော့ပြုတ်လို့ ဘုရင့်နောင်လမ်းမပေါ်ထိုးရပ်သွားတော့ ကျွန်မ လာဆွဲမယ့်ကားစောင့်ရင်း လမ်းဘေးမှာ ကြာကြာရပ်နေရတယ်၊
အဲဒါ Taxiတွေက ဖြတ်သွားရင် လက်ပြပြသွားတော့ ကားငှားမလားမေးတယ်မှတ်လို့ ခေါင်းခါခါပြနေမိတာ။
တအောင့်နေတော့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ဆီဝယ်နေတဲ့ ချာတိတ်တွေက အမ ကားပေါ်တက်ထိုင်နေပါ။
Taxi တွေက ဖောက်သယ်ရှာနေတယ်မှတ်ပြီး မေးနေတာဆိုတော့မှ လန့်ပြီးကားထဲ ပြန်ဝင်နေရတယ်။
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: တူညားနဲ့မတူအောင်ပြောမယ်
အောင်ပုတို့က ကိုယ်တွေ့တွေကို တစ်ဆယ်နဲ့ရောင်းနေတာနော်
nature says: ကြားဖူးနားဝရှိသွားတာပေါ့။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 349
shwe ni says: သတိထားစရာတခု သိရတာပေါ့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အမှတ်တမဲ့လုပ်မိနိုင်တဲ့အရာတွေနော ။
manawphyulay says: ဒါများ ညီမလေးရယ်… အနားမှာ ရှိတဲ့ အုတ်ခဲကျိုးနဲ့ ပစ်ပေါက်လိုက်ပြီးရော… လူတွေကို ဘယ်လိုများ အောင်းမေ့နေလဲမသိဘူး။ စရိုက်တွေကလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်လာပြီ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 98
meengelay says: ဆိုးပါ့ ကွယ် အပြင်တောင်မထွက်ရဲဖြစ်နေပြီ..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 939
fatty says: ဟုတ်ပါ့ဗျား အဲဒီသားရေပင် ( ကြက်ပေါင်ကွင်း) ကိစ္စက ကျနော်တို့ကျောင်းသားအရွယ်ကထဲကရှိတာဗျ။
ကဲ အခု ဖတ်ရမှတ်ရတော့ ဗဟုသုတ တမျိုးတိုး သွားတာပေါ့နော ….။
ဒါကြောင့်ပြောတာ နား မျက်စိဖွင့်ထားကြပါလို့ …….။
နောက်ပုံစံတမျိုးပြောင်းသွားရင် ရွာထဲက သိတဲ့သူတွေ သတိပေးကြပါအုံး …။
စုံ စုံ says: အဲ့ဒိတဏှာရူးတွေကလဲတွေ့ကရာမိန်းကလေးတိုင်းကို
ကိုယ်ချင်းစာသင့်တယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 935
ရွှေဘိုသား says: တဏှာရူးတွေမိန်းမကောင်းလေးတွေကိုထင်ရက်ကြတယ်နော်သူတို့မို့လို့
intro says: အော်… ဒီလိုလဲ ရှိတယ်လား…. အံ့ဖွယ်သုတ
phowagyi says: how wonderful is this experience ha ha
chitsu says: အဲ့လိုမျိုးတွေလည်း၇ှိတယ်ဟုတ်လား
bluerose says: ဗဟုသုတပါပဲလား
နတ်ဆိုးလေး says: သမ္မတကြီး ကိုတင်ပြရမယ်။ သာရေကွင်း ရပ်ကွက် လုပ်ပေးပါလို့။ ဒါမှ မိန်းမကောင်းလေးတွေ အဆင်ပြေမှာ ။ နိုင်ငံတကာမှ အဲ့လိုရပ်ကွက်တွေ ရှိပါတယ်။ မရှိတဲ့နိုင်ငံလဲ ရှိမှာပေါ့နော်။ အများစု တော့ အဲ့လိုတွေ့ဘူးတယ်။
Mon Kit says: မှတ်သားစရာ အဖြစ်နှင့် ဖတ်သွားပါသည်။။
cobra says: ခုမှပဲသိတော့တယ်
chel gyi says: ဆိုးပါ့….